केकी श्रीमती बन्न अयोग्य छिन् : नाजिर हुसेन - hamro Desh
केकी श्रीमती बन्न अयोग्य छिन् : नाजिर हुसेन
काठमाडौँ !! यही शुक्रवारबाट नायक नाजिर हुसेन अभिनीत फिल्म ‘राज्जा रानी’ प्रदर्शनमा आउँदैछ । पछिल्लो पटक प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘गाँठो’ बक्स अफिसमा असफल हुँदा ठूलो झट्काको सामना गर्नुपरेका नाजिर यो फिल्मलाई भने दर्शकको साथ मिल्नेमा विश्वस्त छन् ।
उनी फिल्मले मनोरञ्जनसँगै सन्देश दिने बताउँछन् । फिल्ममा नायिका केकी अधिकारीसँग रोमान्स गरेका नाजिरले ‘राज्जा रानी’मा आफूले देशकै सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति सम्झने ‘राज्जा’को भूमिका निर्वाहा गरेको बताए । फिल्ममा उनी राज्जा यादवको भूमिकामा देखिएका छन् ।
मोफसल टुर सकाएर काठमाडौं फर्किएका नाजिरमाथी सोमवार पत्रकारसँग कुराकानीको क्रममा ४ प्रश्न तेर्सिए, जसको उत्तर उनले यस्तो दिएका छन् ।
१. ‘राज्जा रानी’को प्रदर्शन मिति नजिकिँदै गर्दा मनमा डर र चिन्ता कत्तिको छ ?
‘राज्जा रानी’को रिलिज नजिकिँदै गर्दा चिन्ता र डर दुवै छ । किनभने लामो समयपछि पर्दामा फर्किएको छु । ‘गाँठो’पछि हलमा आउन लागेको फिल्म मेरो ‘राज्जा रानी’ नै हो । ‘गाँठो’ व्यवसायिक रुपमा सफल भएन । त्यसैले ‘राज्जा रानी’ जति महत्वपूर्ण छ मेरो लागि त्यो मलाई मात्र थाहा छ ।
२. फिल्ममा तपाईको भूमिका कस्तो छ ?
मैले फिल्ममा ‘राज्जा’को भूमिका निर्वाहा गरेको छु । ‘राज्जा’ यस्तो खालको छ कि ऊ आफूलाई भोलीको नेता र पर्सिको मन्त्री ठान्छ । ऊ ‘कसैले तपाई भनोस् नभनोस् आफैं मपाई’ हुन खोज्छ ।
३. तपाईलाई फिल्म गर्दाको सबैभन्दा कठिन पाटो कुन थियो ?
जब म सुटिङमा राज्जाको ड्रेस लगाउँथेँ तब मलाई रिस मात्र उठ्थ्यो । मलाई त्यो मात चड्थ्यो । साथीलाई कुट्नु पर्ने सिन र रिसाउनु पर्ने सिनमा म निकै रिसाएको मात्र हुन्थेँ । यो मेरो लागि फिल्म गर्दाको कठिन पाटो थियो । फिल्ममा म रियल नाजिरभन्दा विल्कुलै फरक हुनु पर्थ्यो। म रियलमा चाहीँ राज्जा होइन ।
४. फिल्ममा नायिका केकी अधिकारी तपाईको श्रीमतीको भूमिकामा हुनुहुन्छ । रियलमा चाहीँ उहाँ श्रीमती बन्न योग्य हुनुहुन्छ ?
मेरो लागि श्रीमती बन्न योग्य वा अयोग्य त भन्दिनँ तर केकी जतिबेला रानीको क्यारेक्टर गर्दा साडी लगाएर सेटमा निस्किन्थिन् तब उसलाई परर्फेक्ट हाउस वाइफ चाहीँ देखिन्थ्यो । क्यारेक्टरले पनि त्यो प्रभाव पारेको होला । रियलमा चाहीँ उनी योग्य छिन् भन्दिनँ ।
-फिल्मी खबर बाट साभार